Dowladda Somaliya oo digniin u jeedisay Jamhuuriyadda Jabuuti & Kenya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda Somaliya oo digniin u jeedisay Jamhuuriyadda Jabuuti & Kenya
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe ayaa dalalka Jabuuti iyo Kenya uga digay inay soo fara-geliyaan go’aamada Midowga Afrika ka soo saarayo xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Wasiirka oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in dalalkan ay Midowga Afrika ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed, oo ku aaddan soo jeedinta qodobo ay donayaan in lagu daro warmurtiyeedka lagu wado in Golaha Nabadda & Amniga ee Midowga Afrika ka soo saaraan xaaladda siyaasadeed ee dalka.
“Dowladda Somaliya iyo Midowga Afrika waxa ay horaantii todobaadkan ka wadahadleen, sidii Midowga Afrika uu kaalin wax ku ool ah uga qaadan lahaa, sidii Somaliya ay uga qabsoomi laheyd doorasho qof iyo cod, oo si xor iyo xalaal ah oo ay u dhan yihiin dhamnaan bulshada.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Dubbe ayaa yiri “Ururada aan xubinta ka nahay, diblomaasiyiinta shiyeeshe iyo saaxiibada kale ee diblomaasiyadda Somaliya kala dhaxeyso, waxaan si cad ugu sheegaynaa in Baarlamaanka Federaalka Somaliya uu yahay hay’adda ugu sarreyso ee sharci-dejinta dalka, xeerarka ka soo baxana ay yihin go’aanka ugu dambeeya ee qaanuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, Xukuumaddana ay tahay hay’adda fuliso xeerarkaas dastuuriga ah.”
Dowladda Somaliya ayaa toddobaadkii hore saaxiibada caalamka uga digtay inay ka horyimadaan go’aankii Golaha Shacabka ku meelmariyay Sharciga gaarka ah ee jiheynta doorashooyinka dalka.
Previous articleWasiirka Amniga oo ka warbixiyay dhacdadii Garoonka Aadan Cadde
Next articleMidowga Afrika oo laalay muddo kororsiga Hay’adaha Dowladda Federaalka